सिहदरवार आउँदा आउँदै कसरी काटियो सुवोध पाेखरेलको नाम ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » सिहदरवार आउँदा आउँदै कसरी काटियो सुवोध पाेखरेलको नाम ?
सिहदरवार आउँदा आउँदै कसरी काटियो सुवोध पाेखरेलको नाम ?
काठमाडौ वैशाख २६ गते । स्थानीय विकास तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले सरकारमा पठाउनका लागि तीन राज्यमन्त्रीको नाम टुगों लगाएको छ ।
आज सिहदरवारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्रीमा सुमित्रा विश्वास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्रीमा यशोधा लामा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीमा जनक चौधरीलाई चयन गरेको छ ।
पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा स्थानीय राज्यमन्त्रीमा डा.सुवोध प्याकुरेलको नाम थियो । तर सिहदरवारमा आउँदा आउँदै उनको नाम गायव भएर जनकराज चौधरीको नाम आएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा छलफल हुँदा राज्यमन्त्रीमा तीनजना महिलालाई नै पठाउने छलफल भएको थियो । त्यसमा आशा चतुर्वेदीले आफू राज्यमन्त्रीमा नजाने, पाए भने फुलमन्त्रीमा जाने नभए राज्यमन्त्रीमा नजाने भनेपछि डा.सुवोध पोखरेलको नाम आएको थियो । तर गच्छदारले सिहदरवारमा बसाएको बैठकमा जनकराज चौधरीको नाम चयन भएको छ ।
आज पाँच वजे उहाहरुलाई सपथ खुवाउन तय भएको छ । यशोदा लामा केही दिन पहिले मात्र गच्छदारसँग एकीकरण गर्नुभएको थियो । यही मन्त्रीको विवादका कारणले दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानसँग खटपट भएको कारण उहाँ पार्टी विभाजित गर्नुभएको थियो । र, सोही पार्टीलाई विजयकुमार गच्छदारसँग मिलाएर आज राज्यमन्त्री पद पडकाउन सफल हुनुभयो ।